Autoflowering Feminized Combo mbeu | MyWeedSeeds.com
Mbeu dzese dzembanje
Mbeu dzembanje dzakachipa
Nyore kukura mbeu
Indica / Sativa mhodzi
Mbeu dzemukati dzembanje
Indoor / Kunze mbeu
Mishonga yekurapa mbanje
Mbeu dzekunze dzembanje
Mbanje yeHydroponic inokura
Mbanje dzemukati dzichikura
Kunze mbanje dzichikura
Mapango ekudyara mbanje
Kuchengetedza uye Kuchengetedza matipi
Mahombekombe embesa embanje
Golyoli yekurapa CBD mafuta
LED Kura Mwenje
Kuyerera Kwemhepo & Kufefetedza
Cloning & Kuparadzira
Zvirwere / Zvirwere Kudzora
Pumps & Kudiridza
Matareyi & Matura
Autoflowering Feminized Combo mbeu
Wana mbeu yemahara neese odhiyo!
Type: ruderalis mahybrids
Mamiriro ekunze: mukati / kunze
Zvibereko: avhareji 16oz | 500g m2
Kureba: pakati nepakati 24in | 60cm
Nguva yemaruva: mavhiki manomwe kusvika masere
Nguva yekukohwa: Gunyana
THC nhanho: yakasimba 15% kusvika 20%
Mhedzisiro: yakasimba kwazvo matombo / inosimudzira kumusoro
Isu takasarudza maviri anotyisa echikadzi auto maruva embanje maronda uye takagadzira combo seedpack. Paka rimwe rine 5 Ganja Dwarf Autoflowering feminized mhodzi uye 5 Chiedza chaJah autoflowering feminized mbeu.
Nezve Ganja Dwarf Yakadzivirirwa Autoflowering mbeu:
Iyo Ganja Dwarf aka Lowryder ndeye ruderalis hybrid yeakasarudzika William's Wonder, iyo inopembererwa Mwenje wechiedza uye yakasarudzika ruderalis-rudzi tateguru. Ganja Dwarf / Lowryder inowanzo kurimwa mukati memba, nekuti chimiro chake chipfupi chinokwana nzvimbo diki uye haadi maawa ake echiedza akaderedzwa kumanikidza kutumbuka. Nekuda kweayo otomatiki maruva echisikigo, anokura padanho rake rekutumbuka pasina chinomera chekukura. Iyo auto inotumbuka chirimwa inotanga ichikura mushure memasvondo matatu. Zvisinei nemamiriro ezvinhu akareruka. Saka zita "auto maruva". Ganja Dwarf / Lowryder mbanje michero inogadzira yakasimba zvine simba, asi iyo yepamusoro THC mwero inoita kuti ive yakanaka. Tarisira yakasimba chiratidzo chemuviri buzz iyo yakaturika kwenguva refu. Kunhuhwirira kwake uye kuravira kune zvakanyanyisa zvinonhuwira neiyo shoma yazvino yemichero inoyerera pasi.
Nezve Chiedza chaJah Feminized Autoflowering mbeu:
Chiedza chaJah mbanje mbanje dzinodzika kubva kune yakanyanya kupembererwa Jack Herer sativa Haze dzakasiyana uye ine simba rakanyanya. Hunhu hwaJack Herer hunotonga, zvichiita kuti Chiedza chaJah chive chimwe chemhando dzakanakisa mumbeu yembeu emporium. Nekuda kweayo otomatiki maruva echimiro, uyu mbanje chirimwa chine hurefu hushoma uchienzaniswa neyakajairwa & feminized Chiedza chaJah zvakasiyana-siyana. Anokura gobvu repakati cola (repakati bud) iro rinogadzira masumbu mazhinji emabhureki akaremerwa kwazvo neTHC makristasi uye inonamira resin zvekuti kunyange mashizha ake nematavi anoputirwa. Yake yekuhwina mubairo-inoratidzira hwema hwake - yakasimba mhiripiri Haze yakasanganiswa nemuchero wemucitrus. Chiedza chaJah chinogadzira chakasimba kune vanoputa, hunosimudzira hutachiona hwepamusoro uye giggly mood.
Ganja Dwarf Autoflowering feminized mhodzi
Chiedza chaJah autoflowering feminized mbeu
Chiedza chaJah chikadzi mbeu
Chiedza chaJah nguva dzose mbeu
Ziva! Mhando dzese dzembanje dzinokwanisa kugadzira maruva echirume pa100% yezvirimwa zvevakadzi. Ichi chiitiko chinoshandawo kumadzimai echikadzi kunyanya pasi pekushushikana kwakasimba kunokonzerwa nemaitiro akasiyana ekukura. www.myweedseeds.com haigone uye haizotora mutoro wekurima kwakadaro kunoitika zviitiko zvevarume.
Kurongeka & Kutumira
Kodzero dzose dzakachengetedzwa - Copyright © 2020 www.myweedseeds.com
Saiti ino ine yakabatana zvinongedzo kune zvigadzirwa. Tinogona kugamuchira komisheni yekutenga kunoitwa kuburikidza neaya ma link.